China Yakakurumbira nyowani yemaitiro bvudzi bhurasho fekitori uye vagadziri | Yongsheng
Zvinhu: ABS, Rubber, Nylon, Bristles
Ruvara: Ruvara UV emagetsi, Rubha unhani, jekiseni… Customization.
Pre-kugadzirwa ------sampu------ kusimbisa-Chinyorwa------ kutenga-Chikamu ------chikamu------ Jekiseni-Hunhu------ kuongorora-Chikamu ------chikamu ------pamusoro------ pedza-Hunhu ------kuongorora-Assembly-Hunhu ------kuongorora-kurongedza.
Isu tine akakurumbira uye emafashoni maitiro bvudzi mabhurashi.
Unogona kusarudza muRudzi rwakashama ruva UV yemagetsi kupedzisa bvudzi bhurashi, Rakajeka jekiseni diki bvudzi bhurashi ine nylon bristles, Rakajeka rabha kupfeka nyoro nyowani nemakomba pamutsago, Ruvara rwakatota bhurasho nerabha kupfeka, Ruva gradient UV emagetsi kupedzisa pamutsago bvudzi bhurashi, Jekiseni classic pamutsa bvudzi bhurasho, Teasing bhurasho nemabristles uye nylon yakavhenganiswa, Wet bhurasho mu 3D yekudhinda kara dhizaini.
Uye isu tine zvinhu zvitsva zvinotarisira mapurasitiki, matanda uye senge. Iyo Biomass inosanganiswa zvinhu. Iyo mhando nyowani yekusagadzikana zvinhu iyo inoumbwa neye macromolecular zvinhu uye biomass zvinhu. Sezvo zvirimo zvezvinhu zvitsva zvemamiriro ekunze zviri pamusoro pe50%, chigadzirwa chine zvakanakira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye yakadzika kabhoni. Uye isu tine bamboo fiber uye mashanga anowanikwa.
Kubiridzira bhurasho kunogona kuvandudza kudhirowa kudzora pamwe nekubatanidzwa kweboar uye nylon bristles. Gonzo muswe Tapered mubato inoratidzira magumo ekupatsanura, kupatsanura, uye kwekupedzisira kubata. Ipfupi nguruve bristles kugadzira kusagadzikana uye kupenya uye tourmaline yakasimbiswa nylon bristles inofamba nyore kuburikidza nevhudzi. Nguruve bristles kukwesha kunosuka uye mamiriro bvudzi uye kugovera bvudzi mafuta echisikigo pamusoro pebvudzi shaft.
Iyo nyowani yekunze bvudzi bvudzi bvudzi rakagadzirwa neanti-static zvinhu, zvakapfava pini zvinounza zvakakurisa kuomarara nekusimba. Yakakwana mhinduro dzebvudzi ichitenderera, matambudziko emagetsi uye nyore kushambidza.
Pashure: Wooden uye yemishenjere bvudzi bhurasho
Zvadaro: Mini bvudzi bhurasho nemavara erabha unhani, uv magetsi, kuendesa mvura
Yakasarudzika Bamboo Bvudzi Brashi
Nyora Bvudzi Brush
Oem Bamboo Bvudzi Bhurashi
Nyanzvi Wooden Bvudzi Brashi
Wood Massage Bvudzi Brashi
Wooden Paddle Bvudzi Brush